Vaovao - zava-mahadomelina biolojika biby sy ny fampiasana azy
Fanafody biolojika biby sy ny fampiasana azy
I. Fiarovana sy fanaterana fanafody pharmaceutika
(1) Ny vaksiny dia mora tohanan'ny hazavana sy ny maripana ary mampihena haingana ny fahombiazany, noho izany dia tokony hotehirizina ao anaty vata fampangatsiahana amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 ° C. Ny tsy fampandehanana ny vaksinina toy ny hatsiaka dia misy fiatraikany ratsy amin'ny fahombiazana, noho izany ny vata fampangatsiahana dia tsy azo avela hampangatsiaka be loatra, ka mahatonga ny vaksiny hihena sy tsy hahomby.
(2) Rehefa tratra ny vaksininy, dia tokony mbola tazonina ao anaty vata fampangatsiahana izany, entin'ny kamio mangatsiaka, ary hanafohezana ny fotoana fandefasana araka izay azo atao. Rehefa tonga any amin'ny toerana aleha dia tokony hapetraka ao anaty vata fampangatsiahana 4 ° C. Raha tsy misy kamio mangatsiaka azoentina, dia tokony halefa ihany koa izy amin'ny alàlan'ny popsicle plastika (vaksin-dronono) na ranomandry maina (vaksinina maina).
(3) Ny vaksinina miankina amin'ny sela, toy ny vaksin-dronono ho an'ny vaksinin'ny turkey-herpesvirus an'ny Marek, dia tsy maintsy tazonina anaty azota azota amin'ny 195 ° C. Mandritra ny vanim-potoana fitahirizana, zahao raha hanjavona isan-kerinandro ny azota azota ao anaty kaontenera. Raha efa ho faty izy dia tokony ampiana.
(4) Na dia eken'ny firenena vaksinina mahafeno fepetra aza izany, raha toa ka voatahiry tsara, entina ary ampiasaina io dia hisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny vaksiny izany ary hampihena ny fahombiazany.
Faharoa, ny fampiasana vaksiny dia tokony handinika ny raharaha
(1) Voalohany indrindra, dia tokony hamaky ny torolàlana ampiasain'ny orinasa mpamokatra fanafody, ary mifanaraka amin'ny fampiasana azy sy ny fatrany.
(2) Hamarino raha manana taratasy fanamarinana fametahana adika ny tavoahangy vaksinina ary mihoatra ny vanim-potoana tapitra izany. Raha nihoatra ny datin'ny lany vaksiny io dia tsy azo ampiasaina.
(3) Ny vaksininy dia tokony hisoroka tanteraka ny filan'ny masoandro.
(4) Ny veromanitra dia tokony andrahoina na alefa autoclaved ary tsy tokony hamindra otrikaina simika (alikaola, asidra stearika, sns.).
(5) Ny vaksiny maina aorian'ny fampidirana ny vahaolana voadoka dia tokony hampiasaina faran'izay haingana ary tokony ampiasaina ao anatin'ny 24 ora farafaharatsiny.
(6) Ny vaksiny dia tokony hampiasaina amin'ny omby mahasalama. Tokony haato ny vaksiny raha tsy misy angovo, tsy fahazotoan-komana, tazo, fivalanana na soritr'aretina hafa. Raha tsy izany, tsy vitan'ny hoe tsy mahazo tsimatimanota tsara, ary hampitombo ny toe-pahasalamany.
(7) Vaksiny tsy mihetsika Tsy ampiana ny ankamaroan'ny adjuvants, indrindra ny menaka mora entina. Isaky ny nakana ny vaksininy avy tao amin'ny syringe dia nihovotrovotra mafy ilay tavoahangy vaksinina ary homogenizena tanteraka ny votoatiny alohan'ny hampiasana azy.
(8) Ny tavoahangy vita amin'ny vaksinina sy ny vaksinina tsy ampiasaina dia tokony hovonoina ary hatsipy.
(9) Raketo amin'ny antsipiriany ny karazana vaksinina nampiasaina, ny marika, ny isan'ny batch, ny daty lany daty, ny datin'ny tsindrona ary ny valin'ny tsindrona ary tazomy mba hojeren'ny ho avy.
Fahatelo, ny vaksinin'ny tsindrona rano fisotro akoho dia tokony handinika ny raharaha
(1) ny loharano fisotroana dia tokony ho rano madio tsy misy fanosotra otrikaina aorian'ny fampiasana azy.
(2) Ny vaksinim-panafody dia tsy tokony hamorona rano misy famonoana otrikaina na rano misy asidra na alkaly. Rano voadio no tokony ampiasaina. Raha tsy maintsy mampiasa rano fantsakana ianao dia ampio 0,1 grama Hypo (Sodium thiosulfate) ka hatramin'ny rano 1 000 ml aorian'ny famafana ny rano fisotro mba hamonoana ny rano avy amin'ny paompy, na ampiasao mandritra ny 1 alina.
(3) Ny rano fisotro dia tokony haato alohan'ny fanindronana, adiny 1 eo ho eo amin'ny fahavaratra ary adiny 2 eo amin'ny ririnina. Amin'ny fahavaratra dia somary avo ny hafanan'ny parasy fotsy. Mba hampihenana ny fahaverezan'ny otrikaretina vaksinina dia tsara ny fampiharana ny fisotroana rano fisotro rehefa ambany ny mari-pana amin'ny vao maraina.
(4) Ny habetsaky ny rano fisotro amin'ny vaksiny namboarina dia tao anatin'ny 2 ora. Ny habetsaky ny rano fisotro isaky ny paoma isan'andro dia toy izao: 4 andro taona 3 ˉ 5 ml 4 herinandro 30 taona 4 ml 4 volana 50 taona
(5) Rano fisotro isaky ny 1000 ml Ampio vovo-dronono vita amin'ny ronono 2-4 grama mba hiarovana ny vaksinin'ny fahaveloman'ny viriosy.
(6) Tokony hamboarina ny loharano fisotroana sahaza. Farafahakeliny 2/3 amin'ireo akoho amina vondrona akoho afaka misotro rano amin'ny fotoana iray sy amin'ny elanelam-potoana sy elanelana mety.
(7) Ny famonoana rano fisotro dia tsy tokony ampidirina amin'ny rano fisotro ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fitantanana ny rano fisotro. Noho ny fanakanana ny fielezan'ny vaksinin'ny vaksinina amin'ny akoho.
(8) Ity fomba ity dia tsotra kokoa ary mamonjy amin'ny asa noho ny fanindronana na fitetezana maso, orona eo amin'ny orona, fa ny famokarana viriosy miaro hery fiarovana no maharatsy azy.
Tabilao 1 Fahazoana misotro rano misotro rano fisotro akoho taona 4 andro 14 andro 28 andro 21 volana 21 Mandrosoa rano fisotro 1 000 5 litatra 10 litatra 20 litatra 40 litatra naoty: azo ampitomboina na hihena arakaraka ny vanim-potoana. Efatra, fanindronan'ny akoho amam-borona dia tokony handinika ny raharaha
(1) ny famafazana tsimok'aretina dia tokony hofidina avy amin'ny toeram-piompiana akoho madio dia ny fampiharana ny paoma akoho mahasalama, noho io fomba io raha ampitahaina amin'ny maso, orona ary fomba fisotroana, dia misy fidirana an-tsokosoko matotra, raha mijaly amin'ny CRD dia hanao ratsy kokoa ny CRD. Aorian'ny tsimokaretina famafazana dia tsy maintsy tazonina amin'ny fitantanana fahadiovana tsara izy io.
(2) Ny kisoa ampidirina amin'ny famafazana dia tokony ho 4 herinandro no ho miakatra ary tokony hotantanan'ny olona iray voan'ny vaksinin'ny vaksiny mivantana izay tsy dia misy vokariny.
(3) Ny famonoana dia tokony hapetraka ao anaty vata fampangatsiahana 1 andro alohan'ny fampidirana. Isaky ny takelaka fanalefahana 1 000 no nampiasaina tao anaty cages 30 ml sy feeder fisaka 60 ml.
(4) Rehefa mipetaka ny tsifotra, dia tokony hakatona ny varavarankely, ny mpitsoka rivotra ary ny lavaka famohana ary alefa ny zoro iray amin'ny trano. Aleo manarona ilay lamba plastika.
(5) Ny mpiasa dia tokony hisaron-tava sy solomaso misy rivotra.
(6) Mba hisorohana ny aretin'ny famerenana amin'ny laoniny, dia azo ampiasaina ny antibiotika alohan'ny sy aorian'ny famafazana azy.
Fahadimy, ny fampiasana akoho amin'ny fampiasana vaksininy
(1) Ny vaksinin'ny papelika akoho Newtown dia azo zaraina ho vaksinina velona sy vaksinina tsy mihetsika.
Fotoana fandefasana: Feb-01-2021
Misy vokatra tianao ve?
Arakaraka ny filanao no amboary ho anao ary omeo vokatra sarobidy kokoa ianao.